The Good Doctor (Season 2) ၊အပိုငျး (၁၁) | MM Movie Store
The Good Doctor (Season 2) ၊အပိုငျး (၁၁)
The Good Doctor စီးရီးဟာ နာမညျကွီးကိုရီးယားစီးရီးကိုပွနျလညျရိုကျကူးထားတာပါ။ကိုရီးယားစီးရီးကို မကွညျ့ဖွဈလိုကျပမေယျ့ဒီအမရေိကနျစီးရီးကိုတော့ စိတျဝငျတစားကွညျ့ဖွဈပါတယျ။
ဆရာဝနျစီးရီးတှမှောတော့ အမရေိကနျစီးရီးတှကေ အမြားကွီးပီပွငျပါတယျ။အသုံးအနှုနျးတှေ လှုပျရှားမှုတှနေဲ့ ရောဂါတှကေ အတျောလေး သဘာဝကပြါတယျ။ဇာတျလိုကျကတော့ Autism အျောတဈဇငျရောဂါရှိတဲ့
ပါရမီရှငျ ခှဲစိတျအလုပျသငျ ဆရာဝနျတဈယောကျပါ။သူ့ကို ဆေးရုံအုပျကွီးက သူ့ရာထူးနဲ့ရငျးပွီး ထောကျခံပေးကာအလုပျဆငျးခှငျ့ပွုခဲ့ပါတယျ။သူရောကျသှားတဲ့ ခှဲစိတျဆရာဝနျအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျကအရမျးတျောပွီး မာနကွီးတယျ၊ သူ့တှဲဖကျတှကေလညျး လူသနျးဆနျသူတကိုယျကောငျးဆနျသူ စသညျဖွငျ့ လူအမြိုးမြိုးနဲ့ ကွုံလာရပါပွီ။
သူ့ရဲ့ ထူးဆနျးတဲ့တှေးချေါပုံတှေ လူတှနေဲ့ကသိကအောကျဟာသတှေ၊ အမှနျနဲ့အမှားကွားက ကငျြ့ဝတျတှနေဲ့ အတျောကိုဝဝေဆောဆာရှိတဲ့ ဇာတျလမျးပါပဲ။House MD, Grey Anatomy လိုမြိုးတှေ ကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျတော့လုံးဝကနြေပျစမေယျ့ ဇာတျလမျးဖွဈပါတယျ။
The Good Doctor စီးရီးဟာ နာမည်ကြီးကိုရီးယားစီးရီးကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ကိုရီးယားစီးရီးကို မကြည့်ဖြစ်လိုက်ပေမယ့်ဒီအမေရိကန်စီးရီးကိုတော့ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်စီးရီးတွေမှာတော့ အမေရိကန်စီးရီးတွေက အများကြီးပီပြင်ပါတယ်။အသုံးအနှုန်းတွေ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ရောဂါတွေက အတော်လေး သဘာဝကျပါတယ်။ဇာတ်လိုက်ကတော့ Autism အော်တစ်ဇင်ရောဂါရှိတဲ့
ပါရမီရှင် ခွဲစိတ်အလုပ်သင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။သူ့ကို ဆေးရုံအုပ်ကြီးက သူ့ရာထူးနဲ့ရင်းပြီး ထောက်ခံပေးကာအလုပ်ဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူရောက်သွားတဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအရမ်းတော်ပြီး မာနကြီးတယ်၊ သူ့တွဲဖက်တွေကလည်း လူသန်းဆန်သူတကိုယ်ကောင်းဆန်သူ စသည်ဖြင့် လူအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံလာရပါပြီ။
သူ့ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေ လူတွေနဲ့ကသိကအောက်ဟာသတွေ၊ အမှန်နဲ့အမှားကြားက ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ အတော်ကိုဝေဝေဆာဆာရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါပဲ။House MD, Grey Anatomy လိုမျိုးတွေ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့လုံးဝကျေနပ်စေမယ့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
(Soliddrive) Small Size ~ Download
Are You Human Too? Episode 09 & 10
Are You Human Too? Episode 07 & 08
Merlin Season 1 (Episode 4)
Are You Human Too? Episode 05 & 06
Merlin Season 1 (Episode 3)
Are You Human Too? Episode 1-2
The Great (Season 1) အပိုငျး (၇)